Teknolojia ho an’ny Fangaraharahana : lesona dimy azo notsoahina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2010 20:33 GMT
Niara-niasa mikasika ny rindra tsaratsara kokoa ho amin'ny fanasokajiana sy fitsinjarana ireo fikambanana ampolony hita amin'ny tranonkalantsika izaho sy i Renata Avila raha niroso tamin'ny dingana faharoa amin'ny Teknolojia ho an'ny Tambajotra mangarahara isika. Iray amin'ny tanjona napetrakay ny mba ho mora ho an'ireo mpampiasa ny hahita ireo tetikasa izay tsy miorina fotsiny eo amin'ny firenena misy azy fa eo amin'ny sehatra manokana na ny olana izay mahaliana azy ihany koa — satria koa anie isika mikatsaka ny Teknolojia ho an'ny Tambajotra Mangaharaha e — ireo fitaovana samihafa izay ampiasain'izy ireo .
Ao anatin'ity fandaharan'asa ity, vao haingana izahay no nanao fampahafantarana ho an'ny vondron'ny mpikaroka ny mangarahara mikasika ireo lesona dimy azonay hatreto mikasika ny fampiasana ny aterineto sy ny finday hanapariahana ny fangaraharana sy ny andraikitra miaraka amin'izany. Zavatra iray tena mora miova haingana ny teknolojia ho an'ny fangaraharahana — teo anelanelan'ny fotoana nanaovanay ny fampahafantarana hatramin'izao anio izao, nandefa ny Crowdmap ( sarintany ifandrimbonana) fitaovana fanaovana sarintany Ushahidi izahay, izay mamela ny tsirairay ho afaka hiditra ao amin'ny Ushahidi nefa tsy mila mampiditra ny Ushahidi ao amin'ny solosaina lohamilin-dry zareo akory. Ny dikan'izany dia hoe ireo lesona sy teknolojia izay faritantsika eto ambany dia asa mivoatra, ary isaorana mialoha ireo kiana sy fanontaniana avy aminareo. Aorian'ny famoahanay ny dingana manaraka mikasika ny tranga nohalalininay, dia mihevitra ny hiverina hijery ireo lesona ireo izahay ary hijery hoe inona no niova .
Azo apetraka amin'ny fitaovana na firaketana isan-karazany, miankina amin'ny vokatra tadiavina sy ny tontolo iasàna, ny angona. Misy ny tolotra sasany toy ny Frontline SMS izay mampiasa ny somaiso tsotra amin'ny ankapobeny, fa ny hafa tahaka ny Ushahidi kosa mampiasa fomba maro hafa anisan'izany ny Simaiso , ny Twitter, mailaka ary ireo endrika hafa ao amin'ny tranonkala.
Natao hanaraha-maso ny fifidianana ny filoham-pirenena tamin'ny taona 2007 tany amin'ny firenena ny Tambajotran'ireo mpanara-maso ny fifidianana amin'ny finday tao Nizeria (Network of Mobile Election Monitors ) (NMEM). Matetika no voafetran'ny fotoana sy ny toerana ireo mpanaramaso ofisialy ny fifidianana, eny fa na dia eo noho ny satany ofisialy aza — mety hampihena ireo tsy fanarahan-dalàna ka handiso ireo valin'ny fanaraha-maso mety hitranga any amin'ireo biraom-pifidianana ny fametrahana azy amin'ny toerana talaky maso ao amin'io toerana manokana io. Niara-niasa tamin'ny Frontline SMS ny NMEM mba hananganana ny rafitra fanaraha-maso ny fifidianana izay mety hanampy ny vahoaka hanaraka kokoa ny fitsipika ara-politika raha toa izany ka difotry ny olana niaraka tamin'ny ezak'ireo mpanaramaso ny fifidianana teo aloha. Mpiara-miasa voasoratra anarana, voaofana avy amin'ny faritra isan'isany ao Nizeria no nanara-maso ny fifidianana raha nanaparitaka ny akon'ny ezaka nataon-dry zareo tamin'ireo mpifidy, izay namporisihana ihany koa mba handefa vaovao .
Miisa 4 tapitrisa fotsiny any Kenya ny mpampiasa aterineto raha maherin'ny 19 tapitrisa kosa ny mpampiasa finday (loharano: Banky Iraisam-pirenena ). Mamela ny vahoaka hahazo vaovao mikasika ny vola izay natokana ho an'ny tetikasa fampandrosona ny faritra misy azy amin'ny alalan'ny fandefasana hafatra tsotra an-tsoratra fotsiny ny Fitaovana fanaraha-maso ny tetibola (Budget Tracking Tool) . Mahangona simaiso-manontany eo amin'ny 4000 hatramin'ny 4500 isam-bolana eo ny tranonkala ary mampiasa ireo vaovao voarainy ny vahoaka hamakiany bantsilana ny kolikoly misy any amin'ny faritra hatrany anivon'ny governemantam-pirenena .
Rehefa mampiasa fitaovana nomerika , tandremo tsy ho “latsa-pitia amin'ny zavatra namboarinao .” Afaka mandany andro sy vola ianao manamboatra ny seha-pifaneraserana nomerika tsara indrindra eran-tany, nefa kosa ny tanjonao sao dia eo amin'ny mpanaraka mampiasa kokoa ny fampielezam-peo noho ny solosaina, ka ho kely ny fiantraikan'izany amin'izy ireo. Manambatra ireo fitaovana nentim-paharazana sy nomerika ny sasany amin'ireo tetikasa tena mahomby indrindra hanatratrarana ny vahoaka tsy anavahana na inona ny teknolojia ampiasaina na inona. Manaiky ny fikambanana fa ny fitaovana tsara indrindra hanaparitahana ny fangaraharana sy ny fifampatokisana dia ny iray amin'ireo izay tena ampiasain'ny mponina. Mety tsy ho tena raitra na manaitra noho ny seha-pifaneraserana nomerika ny fampielezam-peo, gazety, fahitalavitra, ivotoerana fiantsoana sy ny fihaonam-bahoaka, nefa amin'ny toerana sasany, mety hahomby kokoa mihitsy izy ireo .
Rafitra saika miorina amin'ny fero ny Freedom Fone . Afaka maka ny rindrambaiko amin'ny aterineto maimaipoana ny fikambanana ary mividy ny fitaovana ilaina amin'izany amin'ny vidiny latsaky ny 100 Euro/126 Dolara Amerikana . Tsy mila solosaina ireo mpampiasa farany ary tsy mila mampiasa Simaiso ihany koa – mila miantso fotsiny izy ireo. Alefan'ny Freedom Fone ao amin'ny seha-pifaneraserana fihainoana io” vaovao nalefa io ary tonga amin'ny faritra mampiaraka ny litera sy ny fomba fiteny ary manome alalana ny mpampiasa hanoratra mihoatra ny litera miisa 160, fetra farany raha amin'ny simaiso “. Afaka mampiasa io rafitra io ny fikambanana hanaparitahana ny vaovao, hitarihana ny biraom-pifidianana, na hanangonana ny vaovao avy amin'ny mponina izay afaka marihina sy arahany amin'ny fampiasana ny rindram-baikon’ ny Freedom Fone .
Manaraka ny fitsipika fanivanana ho an'ny mpitsara, ho an'ny mpampanoa lalàna, ny manam-pahaizana manokana amin'ny fanisana vola, ny mpiaro ny vahoaka, ary ny masoivoho nasionaly any Goatemala ny Guatemala Visible izay manaparitaka fanazavana mikasika ny fandehany izay efa nentina tao ambadiky ny rindrin'ny tsiambaratelo. Ankoatry ny fametrahana ireo fanampim-panazavana ho hita eo amin'ny aterineto, mampiasa petan-drindrina ihany koa ny tetikasa, apetaka amin'ny toerana fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka, fandaharana amin'ny fampielezam-peo sy amin'ny fahitalavitra amin'ny fomba fitenin'ny fiaraha-monina eo an-toerana hanandratana ny fahatsapan-tenan'ny tsirairay .
Niarahana nanoratra tamin'i Renata Avila ity lahatsoratra ity.